Bitcoin mumakore gumi anotevera - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Bitcoin mune Inotevera Gumi
Sezvo muvambi ane mukurumbira Nakamoto akaronga bepa rinoburitsa mazano ake emari isina muganho uye yakatemerwa mari, iyo yakavepo pachena muna Gumiguru 31, 2008, Bitcoin yaiitirwa kupesana nemari yenyika neyehurumende. Mapato matatu haadiwe kuti matransaction aonekwe seakavimbika mumaziso e Bitcoin holders. Pane kudaro, zvinhu zvose zvinoitwa nenzira a blockchain, network yepeer-to-peer network inoitisa ongororo uye kutendeka. Mukuedza kugura vayananisi, sechikamu che Bitcoin''s proposed architecture, Nakamoto akapokana kuti mari dzekutengesa dzaizokwira zvekuti chero kutengeserana hakuchakwanisa kuchengetedzwa uye kusasanganisa mukana wezvidiki uye zveapo neapo.
Mushure memakore gumi ekutanga BitcoinKuvapo, chinangwa chepakutanga chiri mukuona. Kuwedzera kwehurumende muzana rino remakore kwakapa nzira pakuiswa kwayo pakati. Vanhu vane huwandu hwakakosha hwe bitcoins kana mamwe marudzi e bitcoin kero dzinofungidzirwa kutarisa mutengo wemari mumisika. Zviri nyore kuti vanhu vawane kudhindwa kwemari nemigodhi mikuru yakatengeswa nemapurazi emigodhi, ayo ari kushanda zvakanyanya. Saka, inonzi imwe chete Chinese firm, Bitmain, ikozvino inodzora ASICs, migodhi-based integrated circuits yakadai se75% yemusika. BitcoinZvivakwa zvazvino zvasvika kumagumo uye zvave kunetsa nekuda kwekukwira kwenyaya.
Dambudziko rinowedzerwa nenyaya yekuti crypto ichangotanga kubudirira, asi nharaunda yayo iri kuwedzera uye ine hupenyu, iyo inobatsira kuitsigira. Cryptocurrency's value yakawedzera mukati megore rapfuura uye inotarisirwa kuramba ichikwira, kunyangwe indasitiri isingasviki makore gumi apfuura yakanga isipo. Kubva pakatangwa Bitcoin, dzinenge 1500 dzakasiyana cryptocurrencies akaunzwa nekuchinjana pane kuchinjana. Mutsara 'iyo blockchain achangobva kuve zita remhuri rakakurumbira uye riri kutaurwa semhinduro kumatambudziko akaomarara 'veInstituteal investor vari. Vashambadziri vadiki vanga vachirovera kukamuri, iine uptick mukati inivhesitimendi kugadzira mutsetse wakanangana nekrispto-zviwanikwa. Zvakare, tanga kutengesa ne CFD Trader Kupinda.
Kuongorora Gumi Rinotevera:
Inogona kuve makore gumi akakosha ekushanduka kwe Bitcoin. Kutarisa kune nzvimbo shoma mushanduko yepasirese, sezvo mukati memamiriro ezvehupfumi mave neshanduko dzakati wandei kusvika pari zvino, pane zvinhu zviviri zvemari zvinofanirwa kutariswa. Bitcoin parizvino inoshandiswa sesese chitoro chemari uye nzira yekubhadhara asi haisati yakura kuti ive nzira yenguva refu yekutengesa. Vanoisa mari vega vakafarira kuwana purofiti inokurumidza yekuchinja kwemitengo. Zvisinei, vagadziri vemitemo munyika yose vakazviona senzira yokubhadhara nayo, yakadai seyokushandisa kubhadhara rokutengesa, nokudaro zvichiita kuti makambani akwanise kuzvitambira.
Kunyange zvese zviri zviviri nzvimbo zvasvika mukukura, nyaya dzekuyera nekuchengetedza dzakamisa zvese zviri zviviri kuti zvisazadzikiswe. Kudzivirirwa ndiyo inogona kunge iri nyaya hombe ye cryptocurrencies uye Bitcoin mumakore apfuura, kana kuti kupindura mubvunzo wokuti “Nei vakaita zvakashata kudaro kazhinji kazhinji?” akadaro mukuru wemichina yaRambus, Chakib Bouda. Yakanyatsochengetedzwa uye yakagadzikana Bitcoin mhoteredzo yaizoparira kugamuchirwa kwakapararira. Mumakore gumi, akaenderera mberi achitaura izvozvo Bitcoin yaizove nechimiro chakasiyana zvakanyanya munyika pane zvazvinoita nhasi.
Kunyanya kushandiswa kwe Bitcoin (kana, nokuda kwechinhu ichocho, kukura kwechikumbiro chayo sekirasi yeasset) kwaizoitika pasina kumwe kufambira mberi mune tekinoroji. blockchain ecosystem. Kuti utongwe sewakabudirira inivhesitimendi, Bitcoin's blockchain inofanira kugadzirisa mamiriyoni ekutengeserana sekondi yega yega. Zviitiko zvakawanda zviri kubuda, zvakaita seMheni Network, zvine chinangwa chekuwedzera Bitcoin saizi yenetwork. Nekuda kwekutariswa kwakapararira kwenhau munguva yakapfuura, nharaunda yakavambwa asi iri kungotanga kuita maruva panguva ino (zvinorevawo kubva pasi). Zvinogoneka kuti hurongwa hwekutonga hucharamba huchichinja sezvo uye pane mukana zvakare wekuti nharaunda inokura.
Parizvino, kubva munaKurume 2021, mutengo we Bitcoin inenge madhora zviuru makumi mashanu, uye huwandu hwayo hwekutengesera hwakapetwa ka50,000 kupfuura avhareji. Goldman Sachs anoenderera mberi nekupa crypto yekutengesa sarudzo, uye Mellon ari kugadzira mhinduro yekuchengeta mari chaiyo.